Ngwaahịa - Delta Ngwa Technics
Banye na otu "Ngwaahịa"
Fraịde, 27 Febụwarị 2015 by Delta Injinịa
Ngwọta akpaghị aka maka ntinye nke nrapado na robots iji hụ na ikwugharị ya na idozi nke ọma. A na - enyocha ma rụpụta ụlọ n'ime ụlọ na onye ahịa iji nye usoro zuru ezu maka usoro mmepụta gị.
bipụtara Azịza omenala
1-akụrụngwa obere egbe ngwa egbe
DAG001 bụ egbe eji eme ihe maka 1 maka ngwa mmiri na ngwaahịa dị iche iche, iji gbasa ma tinye ngwaahịa 1-mejupụtara. Ofdị dịgasị iche iche nke ihe ndozi na mkpocha / ịgba spraying dị iji mezuo mkpa nke ngwa gị.
bipụtara S egbe / Valves
1-akụrụngwa elu ngwa ngwa egbe
DAG002 bụ egbe ngwa ngagharị dị elu nke ihe mgbapụta 1 ga - eme ka ngwaahịa 1 dị ka nrapado na mmiri ndị ọzọ.
Ofdị dịgasị iche iche maka ihe ndozi na nossles extrusion dị iche iche iji gboo mkpa nke ngwa gị.
Ngwa nke ihe dị ala ntinye viscous nke nwere ọkara mebere
DAT050 bụ ihe ngwọta akụ na ụba maka ngwaahịa mepụtara na-enwe 2 na-enwe oke edobere, etinyere maka ngwa ndị isi ebe enweghị mkpa mgbanwe na oke ngwaahịa ahụ.
bipụtara Sistemụ 2-akụrụngwa
Mọnde, 19 Jenụwarị 2015 by Delta Injinịa
Ngwa eji akpaaka 1 nke ngwaahịa mejupụtara
Ezubere DAT 300 maka ntinye na ntinye nke ngwaahịa 1 na ihe dị iche iche dị ka PUR's, ngwakọ, silicones, PVC. Installationwụnye doses dịkarịrị obere agba, mana enwere ike iji ya mee ka ikpochapu ndị na-aga n'ihu.
bipụtara akpaghị aka
Wednesday, 04 February 2015 by Delta Injinịa
Ngwa nke viscous 1C dị elu + na-eme ngwangwa
Ihe nrụnye a dabara adaba na ntinye ma jiri ngwaahịa 1 viscous 1.3 dị elu yana onye na - eme ngwangwa (max XNUMX%). A na-agbakwunye onye na-eme ihe ngwa ngwa a iji mee ka ngwa ngwa onye na-eme ka ọ dịkwuo ike n'ụzọ ga - enwe ike ịhazi ngwa ngwa ngwaahịa a karịa oge ole na ole. Enwere ike ịgbakwunye omegharị ahụ na isi ihe ụfọdụ ma ọ bụ n'oge mkpochapụ ahụ.
Dopịpụta ntakịrị nke ihe osooso dị oke mkpa maka sistemụ usoro dosing nke anyị mepụtara. Dabere na rashọn ahụ, enwere ike inye ngwa osisa site na katriiki, pouches ma ọ bụ pails.
Page 1 nke 3